Olana amin’ny tanàn-dehibe : mifanohitra ny fitombon’ny mponina sy ny fari-piainany | NewsMada
Olana amin’ny tanàn-dehibe : mifanohitra ny fitombon’ny mponina sy ny fari-piainany
Vita ny drafitrasa fanajariana ny tany hatramin’ny taona 2020, nahitana ny fitombon’ny mponina betsaka sy haingana an-tanàn-dehibe. Tsy mifanaraka amin’izay fahamaroan’ny mponina monina izay ny fandrosoan’ny toekarena an-tanàn-dehibe.
Nanomboka ny taona 1975, tsy nahitana fampandrosoana ny tanàn-dehibe maro eto Madagasikara, saingy ny mifanohitra amin’izay, fitombon’ny mponina be loatra. Hita misongadina izany eto an-dRenivohitra, tsy mitsahatra mitotongana ny fari-piainan’ny mponina, toy izany koa ny any amin’ireo tanàn-dehibe hafa miaina tanteraka ao anaty fahasahiranana. Ny antony, tsy misy politika momba ny fampandrosoana ny tanàn-dehibe rehetra, tsy mitombo ny famoronana asa, simba ny fotodrafitrasa maro, mihanaka ny tsy fandriampahalemana. Saika mivarobarotra ny ataon’ny mponina, indrindra ireo mpifindra monina avy any ambanivohitra.
Latsaky ny 1 dolara isan’andro ny vola miditra
Mbola hitombo avo roa heny ny isan’ny mponina mipetraka an-tanàn-dehibe ato anatin’ny 15 taona ho avy. Ny fidiram-bola anefa ankehitriny, latsaky ny 1 dolara isan’andro isan’olona amin’ny ankapobeny. Noho izany maika ny famaritana politika ho an’ny fampandrosoana. Miankina amin’ny harinkarena faobe anatiny, toy ny fidiran-ketra ny hijerena izay fomba fampiasam-bola, ankoatra izay tetikasa hahazoana famatsiam-bola hafa. Ankoatra ny ady atao amin’ny tsy fandriampahalemana, asa goavana miandry ny fanajariana ny tany. Tena tokony ho zahana akaiky ireo tanàna ahitana fitombon’ny mponina betsaka indrindra, toy ny eto Antananarivo, Antsirabe, Toamasina.
Fa voakasika amin’ity politika ity ireo tanàn-dehibe rehetra hijerena izay fomba mifanaraka amin’ny zava-misy amin’ny tanàna tsirairay. Tsy miova firy aloha ny filaharan’izy ireo. Be olana indrindra sy feno mahantra Antananarivo Renivohitra. Laharam-pahamehana ny fanitarana ny tanàna, fanatsarana sy fampitomboana ny fotodrafitrasa ao aminy. Mitaky ezaka toy izany koa ireo renivohi-paritra rehetra. Efa voasoratra ao anatin’ny tetibola 2018 aloha momba ny fotodrafitrasa. Ho hita eo ny fanombohana ny asa.
Fitsarana Antananarivo : tsy misy fandraisana raharaha vaovao 21/04/2021
Iray andro taorian’ny nahalany azy…: maty an’ady ny filohan’i Tchad, i Idriss Deby 21/04/2021
Masoivohon’i Alemaina, i Michael Derus: mankahery ny Malagasy manoloana ny valanaretina Covid-19 21/04/2021